JINAN LIDE RUBBER & PLASTIC CO., LTD. RUBBER JOINT
Single Arch Rubber Mmụba nkwonkwo
Ugboro abụọ Arch Rubber Mmụba nkwonkwo
Wide Arch Rubba Mgbakwunye Gburugburu
Spool Rubdị Roba Mbara Mgbakwunye
ELASTOMER PHYSICAL NA EMBIESRIES IMO EKWES COMRPAR AKW .KWỌ
Ntuziaka na Ntinye
ule na ọdụ na ngagharị
A na-akpọkọta nkwonkwo roba na-agbasawanye na piping, nke nwere ike belata mkpọtụ, belata mkpọtụ, chebe sistemụ sitere na ndị mbido yana usoro sistemụ, na-akwụghachi mmegharị na-ezighi ezi site na eriri ọkpọkọ. kpọrọ ya na waya waya yiri mgbaaka na nsọtụ abụọ.
ma ọnweghị oke na:
Usoro HVAC Azụmaahịa
Usoro nsị nke ụlọ ọrụ
Osisi na-agba mmiri mmiri
Ọtụtụ elastomers dị
Obere ihu ihu
Nhazi ma ọ bụ na ebe ana-ahazi otutu
Na-ebelata adọkpụ ọkpọkọ
Anyị na-esi ọnwụ na-emekọ ihe ọnụ.
kwenye anyị, anyị ga - enyere gị aka ịnweta ahịa mbak na ahịa karịa.
Ibi ndu di nma na ntukwasi obi na itukwasi ezi ahia.
Ihe ngosi ozi anyi bu inweta ndi zuta ya site na imeputa ihe mbu, izizi mbu, ndi oru kharia.
A-1 ~ Single Arch Rubber Expplement Joint
Ozi nkowa mgbakwunye pro-arch pro ...
A-2 ~ Mkpokọ Mgbakwunye Arba Nke Abụọ
Nkọwapụta ngwaahịa abụọ-njikwa ...
A-3 ~ Akụkụ Mgbakwunye Roba Gburugburu
Nkọwapụta usoro zuru ụwa ọnụ bụ ...
A-4 ~ Spool Type Roba Mgbakwunye Joint
Ozi nkowa mgbakwunye The spool type rubb ...
A-5 ~ Otu jikoro
Nkọwa ndị metụtara usoro ịlụ bụ ...
Ngalaba A-6 ~
Ozi nkowa mgbakwunye Ase unit
A-7 ~ njikọta roba
Ozi nkowa mgbakwunye Rubber Pipe is e e ...
A-8 ~ ọkọlọtọ ọkọlọtọ
Ozi nkowa mgbakwunye The elastomers are…
Ntuziaka ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị bụ iji nweta ndị zụrụ ahịa site na ịme ngwaahịa mbụ, ogo klas, ọrụ klas mbụ, njikwa nke mbụ na mmụọ nke ihe ọhụrụ, anyị ga-anọgide na-emeju ihe ndị chọrọ nke ndị zụrụ anyị site na nyocha. Teknụzụ mmepụta ọhụrụ, ihe ọhụụ, ngwaahịa ọhụụ na teknụzụ ọhụụ. Anyị na-arụkọ ọrụ na ndị ahịa anyị na-adabere na ibe anyị. Anyị ji obi ụtọ na-anabata ndị ahịa na-asọpụrụ ka ọ bịa leta anyị na mkparịta ụka azụmahịa.
“Nleba anya deformasiti sanitaire” (ACS) nnabata France amalitela na August, 2020.
“Attestation de conformité sanitaire” (ACS) bụ asambodo mmiri French nke na-egosi izi ezi nke ngwaahịa ga-erute na mmiri mmadụ zubere. N'ọnwa Ọgọst, 2020, dabere na ihe ndị chọrọ zụrụ ahịa, anyị ahaziri…
Na June a, nkwonkwo roba EPDM anyị nwere agabiga nke Singapore SETSCO.
Testzọ nnwale: SS 375- itule nke ngwaahịa ndị na-abụghị sọ mmiri maka iji ya mee ihe maka mmiri mmadụ ezubere maka etu esi emetụta mmiri. 1) Akụkụ nke 1: Nkọwa nke 2) Nkebi nke 2: Nlele maka ule 3) Akụkụ 2: 2: 1: Od ...
Na July.2,2019, anyị nwetara asambodo CE.
Na July.2,2019, anyị nwetara asambodo CE. Ngwongwo ndị dị mkpa bụ ịgbasa nkwonkwo rọba na-agbanwe agbanwe, ihe EPDM dị n'okpuru nkọwa EN681-1 1996. Kọọ nọmba No: HST-JNLR2119062045 Ihe ndekọ zuru ezu dị ka ndị a: Single arch flange type a elu ihu / ewepụghị ihu ...
Na June 14th nke 2019, anyị enwetala asambodo Wras.
Mmiri a na-amị amị dị ezigbo mkpa maka ahụike ndị mmadụ. Mmiri mmetọ bụ ihe kachasị akpata ahụ mmadụ. Kwalite ogo nke mmiri nwere ike dị mkpa ma dịkwa oke mkpa. Ọtụtụ mgbe, usoro nke ime ka mmiri dị ọcha dị ka ndị a: Nchedo ...
Can nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka arịrịọ gị niile.
Email anyị, kpọọ anyị ma ọ bụ jupụta n'okpuru nyocha akwụkwọ. Anyị ga-ezute gị n'ime awa iri abụọ na anọ.